Emva kokufunda Incoko ezihamba ze, Ndikhuthazekile ukuba ndiphucule uphawu kunye nokulawula umxholo kule ndawo. Ndifuna ukulawula ngakumbi ukujonga kunye nokuziva kwebhlog yam, ndiye ndafudukela kwisizinda sam, dknewmedia.com, kwi2006 kwaye ndakha indawo yam yokuqala yeWordPress. Kuba bendigxile kwitekhnoloji yokuthengisa, bendingafuni ukuba isizinda esinegama lam singene endleleni, ndiye ndayihambisa indawo (kabuhlungu) kwindawo yayo entsha ngo-2008 apho ikhule khona ukusukela ngoko.
The Martech Zone Iphethwe kwaye iqhutywa DK New Media, iarhente endiyiqale ngo-2009. Emva kokusebenza phantse kuwo onke amasebe amakhulu entengiso kwi-intanethi ngexesha lam lobume kwi-ExactTarget nasekuqaliseni Isihlomelo, Bendisazi ukuba kukho imfuno enkulu yobungcali kunye nesikhokelo kumzi mveliso onzima kangaka.
DK New Media yinkampani yam ejongene nokupapashwa kwam, iipodcast, iindibano zocweyo, iiwebhu, kunye neegig zokuthetha. Highbridge yeyam Iarhente yeNtengiso yeQabane ezinceda iinkampani ukuba zonyuse utyalo-mali lwazo kwi-Salesforce kunye nakwiimveliso zeLifu lokuThengisa. Sinikezela ngokudityaniswa, ukufuduka, uqeqesho, ukubonisana ngobuchule, kunye nophuhliso lwesiko.